सरकारको पछि लाग्दैनौँ, तिहारपछि समर्थन फिर्ता लिन्छौँ : लक्ष्मणलाल कर्ण
राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिदै आएको छ । संविधान संशोधन लगायतका केही माग पूरा गर्ने आश्वासन पाएको राजपाले अहिले ति माग पूरा हुनेमा आशंका व्यक्त गरेको छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर राजपाका शीर्ष नेता लक्ष्मणलाल कर्णसँग ऋषि धमलाले कुराकानी गरेका छन् । प्रतिनिधीसभाअन्तरगतको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका नवनिर्वाचित सभापतिसमेत रहेका कर्णसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :-
लक्ष्मणलाल कर्ण, सभापति, संसदीय सुनुवाई विशेष समिति
संसदीय सुनुवाई समितिको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
संसदीय व्यवस्थामा यस्तो समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधीले जनतकै विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्छ । समितिले संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सक्छ ।
आजको दिनमा नेपालमा संसदीय व्यवस्था निर्विकल्प हो ?
संसारमा केही पनि कुरा निर्विकल्प हुँदैन । तर संसदीय व्यवस्था प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो । यो राम्रो हो भन्न सकिन्छ ।
संसदीय व्यवस्थाको महत्वलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ?
संसदमा जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधी हुन्छन् । जनताकै प्रतिनिधीले सरकार बनाउँछन् । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । सांसदहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । जनताको लागि संसर र सरकारले काम गर्नुपर्छ ।
तर अहिले सरकार र संसदले जनताको हितमा काम गर्न सकेको छ त ?
काम गर्न सकेन भने ५ वर्षपछि जनताले हिसाब किताब गर्छन् ।
अहिलेको आवश्यकता भनेको आर्थिक विकास र समृद्धि नै हो । तर सरकारले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लागेको छ । तपाईलाई के लाग्छ ?
सरकारको इच्छाशक्ति बलियो हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले विकास र समृद्धिका लागि सहयोग गनुपर्छ । अर्कोतिर अहिलेको ऐन कानुन पनि फितलो छ । एउटा कामका लागि ठेक्का दिने काम नै राम्रोसँग हुन सक्दैन । यस्ता विकृतिहरु सच्चयाउनुपर्छ ।
पछिल्लो समय पप्पु कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएका काम अलपत्र भयो भन्ने चर्चा छ । किन यस्तो हुन्छ ?
कुनै एउटा ठेकदारको प्रश्न होइन, सबै ठेक्काको काम दिने प्रणाली नै गलत छ । यो प्रणालीलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्छ । तर सरकारले सुधार गर्न चाहेको छैन ।
तपाईहरुले सरकारलाई समर्थन गर्नुभएको छ । तर तपाईहरुको मागअनुसारको संविधान संशोधनको माग पूरा भएको छैन । अब के गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो पार्टीले सरकारसमक्ष दुईवटा कुरा गम्भीरतार्पूक राखेका छौँ । संविधान संशोधन र मुद्धा फिर्ताको माग पूरा भएको छैन । यो माग पूरा भएन भने सरकारलाई दिएको समर्थनबारे नयाँ निर्णय गर्छौँ । हाम्रो माग पूरा भएन भने सरकारको पछि किन लाग्ने ? दशैँ तिहारसम्म पर्खन्छाँै ।
प्रदेश २ को सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन । किन ?
प्रदेश सरकारलाई जति अधिकार दिनुपर्ने हो, त्यो दिइएको छैन । अधिकार र बेजट नभएसम्म प्रभावकारी काम हुन सक्दैन ।